Field Tech Operations ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် Rob Wentz သည် ASG နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ရော့ Wentz ကွင်းဆင်း Tech မှစစ်ဆင်ရေးများကိုစီမံကွပ်ကဲရန် ASG ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
EMERYVILLE, ကာလီဖိုးနီးယား။ - အဆင့်မြင့်စနစ်များအဖွဲ့ (ASG), တစ်ဦးဦးဆောင်မီဒီယာနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီယနေ့ရော့ Wentz ကုမ္ပဏီ, ထိရောက်သောအောက်တိုဘာ9ပူးပေါင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ မိမိအတာဝန်များကိုထဲမှာ client များအတွက်ညှိနှိုင်းရေးလယ်ကွင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည် Los Angeles မြို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်နယူးယောက်မြို့ဒေသများ။
ASG ဝင်ရောက်မတိုင်မီက Wentz မီဒီယာသိုလှောငျသူစက်ရုံရဲ့အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံထိန်းသိမ်းထားရှိရာ Pedersen Media Group သို့များအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာနှင့်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်အွန်လိုင်းအနီးလိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း။ သူလည်း Post-ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပိုင်း Google အတွက်ဒါရိုက်တာအဖြစ် KTVU မှာသုံးနှစ်ကြာဘူတာရုံရဲ့အနုပညာဦးစီးဌာနတစ်ခုရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာနှင့်စနစ်များစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်လေးနှစ်နေခဲ့ရသည်။ Wentz အဓိက DVD ကိုလွှတ်ပေးနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်ဂီတ, အသံဒီဇိုင်း, 3D animations တွေကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. ထုတ်လုပ်သောမိမိကုမ္ပဏီ, monstrumMedia, လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့ ASG အဖွဲ့ရော့ကြိုဆိုပါတယ်ရန်အလွန်ကျေနပ်နေကြတယ်" ဟု Dave ဗန် hoy, ASG ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသည်။ "ဟုသူကနည်းပညာကိုနားလည်တတ်ပေမယ့်သူကနည်းပညာဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြောပြတယ်ဘယ်လောက်နားလည်မသာ။ သူသည်လယ်ပြင်၌အကြှနျုပျတို့၏ပညာရှင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအကြားစံပြဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်, ငါတို့န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ကူညီလိမ့်မည်။ "
510-654-8300 မှာသို့မဟုတ်မှာ e-mail, မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ Wentz [အီးမေးလျ protected].
အဆင့်မြင့်စနစ်များ Group မှ ASG ပေါင်းစည်းမှု ပုဂ္ဂိုလ်များသတင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု ရော့ Wentz လှံ & Arrows စနစ်များကိုပေါင်းစပ် 2017-10-31
ယခင်: ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့မူရင်း Programming တိုးချဲ့; Brittney Jorgensen ဌာနမှူးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှပုတ်
နောက်တစ်ခု: ခြံထဲမှာခွေးလက္ခဏာတွေညွှန်ကြားရေးမှူး Brent ဂျုံးစ်